Eedeyntii Kenye ee Shariif iyo Aqoonyahan ka hadlay
Wasiirka arrimaha dibbadda Kenya Sam Ongori ayaa ku eedeeyay M/weynihii hore ee Soomaaliya Sh, Shariif Sh, Axmed inuu ka dambeeyay qaraxyadii ismiidaaminta ahaa ee dhawan ka dhacay hotel uu daganaa M/weynaha cusub ee Soomaaliya prof Xasan Sh, Maxud.
Hadal uu warbaahinta ku siiyay Magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya ayaa waxaa uu sheegay inay jirto tuhun ay dawladiisu ka qabto in qaraxyadii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay Hotelka Al-Jaziira oo garoonka Aadan Cadde u dhaw.
Som Ognari wasiirka arrimaha dibbadda Kenya waxaa uu xusay in ka hor intaysan dhicin doorashadii madaxtinimada uu soo wacay Sh, Shariif weydiistana in lagu taageero hase ahaatee ay taasi ka dhago adeygeen.
Tuhunka ugu badan waxaanu ka qabnaa in qaraxyadasi Sh, Shariif ka dambeeyay oo wuxuu doonayay inuu dilo M/weynaha iyo xubnihii aan hogaaminayay
Wasiirka arrimaha dibbadda Kenya sooma uusan soo bandhigin cadeymo hase ahaatee waxaa uu intaa ku daray inay baaritaano wadaan.
Mid ka mid ah Aqoonyahanada Soomaaliyeed pro Maxud Guure oo la hadlay Warlalis ayaa waxa uu sheegay in hadalka wasiirka uu yahay mid halis ku ah amaanka Soomaaliya oo colaad abuuri kara, waxaana uu sheegay in hadalkaasi uusan aheyn mid la dhayalsan karo, isaga oo sheegay in aan la dhihi karin qaraxaasi waxaa ka dambeeya Shariif maadaama uu sheegay inay sheegteen Al Shabaab.
Xarakadda Al-Shabab ayaa sheegatay qaraxyadii ka dhacey Hotelkii uu daganaa M/weynaha cusub ee Soomaaliya ka hor inta uusan madaxtooyada u wareegin